CNR – Minisiteran’ny fampianarana ambaratonga ambony Ahiana tsy handray karama hatramin`ny aprily 2020
Miisa 9 ny ivontoeram-pirenena misahana ny fikarohana (Centres nationaux de recherche) eto Madagasikara. Rantsamangaika eo
Fitokonana eny amin’ny oniversite Hanatevin-daharana ny Seces ny mpianatra anio
Nanentana ny mpianatra rehetra sy ireo departemanta misy eny amin’ny oniversiten’Antananarivo omaly ny filohan’ireo
Diplaoma iraisampirenena amin’ny politeknika Hisokatra ny 5 desambra ny fifaninanana
Ny ankamaroan’ny tanora malagasy nahavita fianarana teny amin’ny ambaratonga ambony dia sahirana amin’ny fitadiavana asa na misehatra amin’ny asa tsy mifanaraka amin’ny
Tsy lasa anefa izy 5 vavy solontena Malagasy noho ny tsy fahampian'ny enti-manana. Na dia efa naroso hanampiana ny vola voangona aza ny teto am-pelatanana rehetra dia mbola lavitra ny ezaka, hoy izy ireo. Na izany aza dia tsy hijanona eo ny tantaran'izy 5 vavy ary tsy ho very maina ny ezaka lehibe natao izay niaretan-tory sy ny fitotototoana hitady mpanohana nandritra ny 2 volana. Hataonay hoy izy ireo izay hahatafiditra anay amin'ny fifaninanana manaraka. Nisaotra eram-po an’izay nanohana rehetra ho fampahafantarana ny ezaka hanatsarana ny fampianarana siantifika eto Madagasikara izy ireo. Nankasitraka ireo nahafoy vola rehetra izy ireo ary nomarihany manokana ny fisaorana ny fiadidiana ny Repoblikan’i Madagasikara sy ny minisitry ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny minisitry ny paositra izay nihaino azy ireo sady nampanantena mihitsy kanefa indrisy.